Gen Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde banaanka keenay sir muhiim ah oo ku saabsan qaraxyadii saxafi | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Gen Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde banaanka keenay sir muhiim ah oo ku...
Gen Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde banaanka keenay sir muhiim ah oo ku saabsan qaraxyadii saxafi
Gen Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde oo kamida h saraakiisha ciidamada dowladda, ayaa markii ugu horeysay shaaciyay arin tuhun badan dhalisay marka Al Shabaab ay weerar ka geystaan magaalada Muqdisho.
Gen Indha-cadde ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marnaba suurtagal aheyn inay hub iyo dareen ciidan siiso Al Shabaab, waxaana uu fogeeyay tuhunada la xiriira in shaqsiyaad dowladda ka tirsan ay dareeska iyo hubka bixiyaan.
Wuxuu sheegay inay Al Shabaab meelo kale ka heli karaan hubka iyo dareenka, balse si cad uma sheegin halka ay ka helaan, isaga oo tusaale usoo qaatay inay furan yihiin xuduudaha Soomaaliya oo aysan jirin cid xakameyn karta waxa ka imaanaya.
“Dareeska ciidamada meelo badan ayuu wadanka kasoo geli karaa, meelo badan ayuuna ka imaan karaa, dalka xuduudahiisa ma ahan mid dowladda ay gacanta ku wada heyso, dowladda Dadaal ayay ugu jirtaa sidii arintaasi wax looga qaban lahaa, dowladana wey ka madax banaan tahay arintaasi”.
“Meelo kale ayaa laga keeni dareeska ciidamada waana lagu wareejin karaa, laakiin dowladda Soomaali barri ayay ka tahay arintaan”ayuu hadalkiisa kusii daray Gen Indhacadde.
Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka oo shalay saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in shaki badan ay ka qabaan halka dareeskii iyo hubkii ugu dambeeyay ka heleen xubnaha Al Shabaab.
Sidoo kale wuxuu sheegay inay shaki ka qabaan xubnaha weerarkii ugu dambeeyay fuliyay inay wateen hubkii ugu dambeeyay iyo dareeskii loo qeybiyay ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Previous articleciidamo boolis ah oo deeganada maamulka Hir-Shabeelle Oo Tababar Loga Furay
Next articleGaari waxyaabo qarxa laga soo buuxiyey iyo raggii watay oo gacanta lagu dhigay.
Weerar Naxdin leh oo ka dhacay deegaanka Dhagtuur ee Gobolka…
Aways Geedi - November 12, 2019 0
Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaaasi uu ka dhacay weerar qorsheysan...